के यो स्वीकार्निय छ कि एउटै कुराको लागि दोहराइ प्रार्थना गर्ने? के हामीले केवल एक पल्ट माग्नको लागि मात्र प्रार्थना गर्नु पर्छ ?
के यो स्वीकार्निय छ कि एउटै कुराको लागि दोहराइ प्रार्थना गर्ने?
प्रश्न: के यो स्वीकार्निय छ कि एउटै कुराको लागि दोहराइ प्रार्थना गर्ने? के हामीले केवल एक पल्ट माग्नको लागि मात्र प्रार्थना गर्नु पर्छ ?
उत्तर: लूका 18:1-7 मा, प्रार्थनामा निरन्तर लागि राख्नको लागि येशुको एउटा दृष्टान्तको उपयोग गर्दछ। उहाँले एउटा विधवाको कहानीलाई बताउनु भयो जो कि एक अधर्मी न्यायीको मा आफ्नो विरोधीको विरूद्ध न्यायको मांग गर्नलाई आइकी थी। प्रार्थनामा उसको हठीको कारण न्यायीले न्याय चुकाइ दियो। येशूको भन्नुको अर्थ यो हो कि यदि एउटा अधर्मी न्यायीले कसैको निवेदनको उत्तर दिन सक्छ जो न्याय पुनको लागि निरन्तर उसको अघि हठी बनेको छ, तब परमेश्वर कति धेरै जो कि हामीलाई– "उसके चुने हुए होने" को कारण (वचन - 7) प्रेम गर्नु हुन्छ र जब हामी निरन्तर प्रार्थना गर्छौ तब उहाँ किन उत्तर दिनु हुन्न र? दृष्टांतलाई जसरी गलत रूपमा बुझिएको छ, हामीलाई यो शिक्षा दिदैन कि, यदि हामी कुनै कुराको लागो बारम्बार प्रार्थना गरि रहन्छौ भने, परमेश्वर त्यसको उत्तर दिनलाई मजबूर हुनुहुन्छ। यसको अपेक्षा मा, परमेश्वर स्वयं बदला लिने प्रतिज्ञाहरु,उनिहरुलाई धर्मी ठहराउनको लागि, उनीहरुको गलतीलाई सही गर्नको लागि, उनीहरुको साथमा न्याय गर्नको लागि, र उनिहारुलाई तिनीहरुका विरोधिहरु बाट छुटकारा दिनको लागि गर्नुहुन्छ। उहाँले यस्तो आफ्नो न्यायको कारण, आफ्नो पवित्रताको कारण, र पापको प्रति उहाँको घृणाको कारण; उत्तर दिनमा गर्नु हुन्छ, उहाँ आफ्नो प्रतिज्ञाहरुलाई स्मरण राख्नु हुन्छ र आफ्नो सामर्थ्यलाई प्रदर्शित गर्नु हुन्छ।
येशुले लूका 11:5-12 मा प्रार्थनाको एउटा अर्को उदाहरण दिनु हुन्छ। अधर्मी न्यायीको दृष्टान्त जस्तै नै, त्यस संदर्भमा येशूको सन्देश यो हो कि मानौ एउटा व्यक्ति आफ्नो एउटा आवश्यकता परेको मित्रको सहायता गर्नको लागि स्वयंलाई समस्यामा पर्दछ, परमेश्वरले हाम्रो आवश्यकताहरुको प्रबन्ध अधिक असल रुपमा गर्नु हुन्छ, किनकि कुनै पनि बिन्तीले उहाँलाई समस्या दिदैन। परमेश्वरको प्रतिज्ञा उहाँको सन्तानको लागि एउटा यस्तो प्रतिज्ञा हो जुन हाम्रो चाहनालाई होइन तर हाम्रो आवश्यकताहरुलाई पूरा गर्दछ। र उहाँलाई सधै हाम्रो लागि के आवश्यक छ भनेर हामीलाई भन्दा धेरै थाहा छ । यही प्रतिज्ञा मत्ती 7:7-11 र लूका 11:13 मा दोहराएको छ, जहाँ निर प्रत्येक "उत्तम वरदान" को धेरै विवरण पवित्र आत्मा को तर्फ गरिएको छ।
यो दुबै संदर्भ हामीलाई प्रार्थना गर्न र निरन्तर प्रार्थनामा लागि रहनको लागि उत्साहित गर्दछ। एउटै कुराको लागि प्रार्थनामा मागी रहनु कुनै गलत होइन। जब सम्म हामी परमेश्वरको इच्छाको सीमाको भित्र रही प्रार्थना गर्दछौ (1 यूहन्ना 5:14-15), तब सम्म मागी रहनुहोस जब सम्म परमेश्वर तपाइको प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्न र तपाईलाई धैर्य राखने र प्रार्थना में निरन्तर लागि रहन सिकाउनु हुन्न। धेरै पल्ट हामी यस्तो कुराको लागि प्रार्थना गर्छौ जब हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको समयमा उत्तर दिनु हुन्न। कति पल्ट हामीले यस्तो कुराको लागि प्रार्थना गर्छौ जुन हाम्रो लागि परमेश्वरको इच्छा हुँदैन, र उहाँले "नाई" भन्नु हुन्छ। प्रार्थना न केवल हाम्रो बिन्तीहरु लाई परमेश्वरको सामने प्रस्तुत गर्नु हो; तर यो परमेश्वरको आफ्नो इच्छालाई हाम्रो हृदयको अधि राख्नु हो। निरन्तर मागी रहनु, निरन्तर खटखटाउनु, र तब सम्म खोगी गर्नु जब सम्म परमेश्वरले तपाईको बिन्तीको उत्तर दिनुहुन्न वा तपाईलाई जब सम्म यो समझ दिनुहुन्न कि तपाईको बिन्ती उहाँको इच्छाको अनुसार होइन।